nhasi | MINYENGETERO MARI
musha Tags nhasi
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 36: 1-23. Verenga uye uropafadzwe. 2 makoronike 36: 1-23: 1 Zvino vanhu ve ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 6th November 2018.
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 34: 1-33, 2 makoronike 35: 1-27. Verenga uye uropafadzwe. 2 makoronike 34: 1-33: 1 Josiya ...
Kuverenga kwedu kwezuva nezuva kweBhaibheri kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 33: 1-25. Verenga uye uropafadzwe. 2 Makoronike 33: 1-25: 1 Manase aive makore gumi nemaviri ...
Kuverenga kwedu bhaibheri nhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 31: 2-21, uye 2 makoronike 32: 1-33. Verenga uye uropafadzwe. 2 makoronike 31: 2-21: 2 Uye Hezekia ...
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 29: 1-36,2 Makoronike 30: 1-27, 2 Makoronike 31: 1. Verenga uye uropafadzwe. 2 makoronike ...
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 26: 1-23, 2 Makoronike 27: 1-9, 2 Makoronike 28: 1-27. Verenga uye uropafadzwe. 2 ...
Mufundisi Ikechukwu Chinedum - November 1, 2018 1
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 25: 1-28. Verenga uye uropafadzwe. 2 Makoronike 25: 1-28: 1 Amazia aive makumi maviri ...